Izindaba - Iphepha lasekhaya laseChina nemikhiqizo yokuhlanzeka yokungenisa nokuthekelisa ngo-2020
Eminyakeni yamuva, umthamo wokungenisa wemakethe yamaphepha asendlini yaseChina ngokuyisisekelo uqhubeke nokwehla. Ngo-2020, ivolumu yokungenisa iphepha yamakhaya minyaka yonke izoba ngamathani ayi-27,700 kuphela, ukwehla ngo-12.67% kusuka ngonyaka wezi-2019. Ukukhula okuqhubekayo, izinhlobo zemikhiqizo ezengeziwe, zikwazile ukuhlangabezana ngokugcwele nezidingo zabathengi, ukungeniswa kwamaphepha asendlini kuzoqhubeka gcina izinga eliphansi.
Emaphepheni asekhaya angenisiwe kusabuswa iphepha elihlaza, elibala u-74.44%. Kodwa-ke, inani eliphelele lokungeniswa kwempahla lincane, futhi umthelela emakethe yasekhaya mncane.
Umqedazwe omusha ongazelelwe womqhele we-pneumonia ngo-2020 ube nomthelela obalulekile kuzo zonke izizinda zempilo emhlabeni jikelele. Ukwanda kwenhlanzeko yabathengi kanye nokuqwashisa ngokuphepha kukhuthaze ukwanda kokusetshenziswa kwemikhiqizo yokuhlanza yansuku zonke, kufaka phakathi iphepha lasendlini, elibuye likhonjiswe ephepheni lasekhaya ukuhweba ngokungenisa nokuthekelisa. Izibalo zikhomba ukuthi ukuthunyelwa kwamaphepha asekhaya eChina ngonyaka we-2020 kuzoba ngamathani ayi-865,700, ukwanda okungu-11.12% unyaka nonyaka; kodwa-ke, inani lokuthekelisa lizoba yi-USD 2,25567 million, ukwehla ngo-13.30% kusuka onyakeni owedlule. Ukuthekelisa okuphelele kwemikhiqizo yamaphepha asekhaya kukhombise ukuthambekela kokukhuphuka kwevolumu namanani entengo, kanti intengo yokuthekelisa ejwayelekile yehle ngo-21.97% uma kuqhathaniswa no-2019.
Phakathi kwamaphepha asekhaya athunyelwe kwamanye amazwe, umthamo wokuthumela kwamanye amazwe wemikhiqizo yamaphepha ayisisekelo nemikhiqizo yamaphepha asendlini yangasese kukhuphuke kakhulu. Umthamo wokuthunyelwa kwamanye amazwe wephepha lesisekelo ukhuphuke ngamaphesenti ayi-19.55 ukusuka ku-2019 kuya cishe kumathani angama-232,680, futhi ivolumu yokuthunyelwa kwamaphepha ezindlini zangasese inyuke ngama-22.41% kuya cishe kumathani ayi-333,470. Iphepha eliluhlaza lenziwe ngamaphesenti angama-26.88% okuthunyelwa kwamaphepha asekhaya, okunyuke ngamaphesenti angu-1.9 kusuka kuma-24.98% ngo-2019. umthelela walobhadane, ukwethuka ukuthengwa kwamaphepha ethoyilethi emazweni angaphandle esikhathini esifushane kuqhube ukuthunyelwa kwemikhiqizo eluhlaza yamaphepha nemibhalo yangasese, kanti ukuthunyelwa kwamanye amaduku, izicubu zobuso, izindwangu zetafula lamaphepha, nama-napkin wephepha kukhombisile ukuthambekela kokuwa kokubili ngevolumu namanani.
I-US ingomunye wabathumeli abakhulu bemikhiqizo yamaphepha asendlini yaseChina. Kusukela ngempi yezohwebo phakathi kwe-Sino-US, umthamo wamaphepha asendlini othunyelwe usuka e-China uya e-United States wehle kakhulu. Inani eliphelele lephepha lasekhaya elithunyelwe e-United States ngo-2020 lingamathani ayi-132,400, aphakeme kunalokho. Ngo-2019, ukwanda okuncane okungu-10959.944t. Iphepha lezicubu ezithunyelwa e-United States ngo-2020 libe ne-15.20% yemikhiqizo yezicubu ezithunyelwa eChina (i-15.59% yokuthekelisa okuphelele ngo-2019 kanye nama-21% okuphelele okuthekelisiwe ngo-2018), isendaweni yesithathu kumthamo wokuthekelisa.
Ngo-2020, inani eliphelele lokungeniswa kwemikhiqizo yokuhlanzeka kwamanzi lalingamathani ayi-136,400, ukwehla konyaka ngonyaka ngama-27.71%. Kusukela ngo-2018, ibilokhu iqhubeka nokwehla. Ngo-2018 nango-2019, inani lokungenisa eliphelele lalingu-16.71% no-11.10% ngokulandelana. Imikhiqizo engenisiwe isaphethwe ngamanabukeni ezingane, abalwa ngama-85.38% wevolumu yokungenisa isiyonke. Ngaphezu kwalokho, ivolumu yokungenisa yamaphepha enhlanzeko / ama-sanitary pads kanye nemikhiqizo yama-tampon yehlile okokuqala eminyakeni emithathu edlule, yehle ngo-1.77% unyaka nonyaka. Ivolumu yokungenisa incane, kepha ivolumu yokungenisa kanye nenani lokungenisa lenyukile.
Umthamo wokungeniswa kwemikhiqizo yokuhlanzeka okumuncayo uyehla futhi, kukhombisa ukuthi amanabukeni wezingane akhiqizwa ekhaya eChina, imikhiqizo yenhlanzeko yabesifazane kanye nezinye izimboni zemikhiqizo yenhlanzeko ethuthukayo athuthuke ngokushesha, okungahlangabezana kakhulu nezidingo zabathengi basekhaya. Ngaphezu kwalokho, ukungeniswa kwemikhiqizo yezenhlanzeko engenayo ngokuvamile kukhombisa umkhuba wokwehla kwevolumu nokwenyuka kwamanani.
Yize imboni ithintekile yilo bhubhane, umthamo wokuthumela ngaphandle wemikhiqizo yokuhlanzeka edonswayo uzoqhubeka nokukhula ngonyaka we-2020, ukhuphuke ngo-7.74% unyaka nonyaka kuya kumathani ayi-947,900, kanti intengo emaphakathi yemikhiqizo nayo inyuke kancane. Ukuthekelisa okuphelele kwemikhiqizo yokuhlanzeka okusamanzi kusakhombisa ukukhula okuhle.
Imikhiqizo yabantu abadala yokungazibambeli (kubandakanya namaphakethe ezilwane zasekhaya) ibalelwa kuma-53.31% wevolumu yokuthekelisa ephelele. Ilandelwa yimikhiqizo yamanabukeni ezingane, ebalwa ngama-35.19% wevolumu ephelele yokuthekelisa, izindawo ezithunyelwa kakhulu zemikhiqizo yamanabukeni ezingane yiPhilippines, Australia, Vietnam nezinye izimakethe.
Ethintwe yilo bhubhane, isidingo sabathengi semikhiqizo yokuhlanza yomuntu siqu sikhuphukile, futhi ukungeniswa nokuthunyelwa kwemikhiqizo yokusula okumanzi kukhombisile ukuthambekela kokukhuphuka kwevolumu nentengo.
Ngo-2020, ivolumu yokungenisa imiphakathi emanzi ishintshile ukusuka ekwehleni ngo-2018 nango-2019 yaya ekunyukeni kuka-10.93%. Izinguquko kumthamo wokungenisa wezisuli ezimanzi ngo-2018 nango-2019 zazingu-27.52% kanye no -4.91%, ngokulandelana. Umthamo wokungenisa okuphelele wamanzi asuliwe ngo-2020 ungama-8811.231t, ukwanda ngo-868.3t uma kuqhathaniswa no-2019.
Ngo-2020, umthamo wokuthunyelwa kwamanye amazwe wemikhiqizo yokusula emanzi inyuke ngo-131.42%, kanti inani lokuthekelisa linyuke ngo-145.56%, okubuye kwaphindeka kabili. Kungabonakala ukuthi ngenxa yokusabalala kobhadane olusha lomqhele pneumonia ezimakethe zaphesheya kwezilwandle, kunesidingo esikhulu semikhiqizo yokusula emanzi. Imikhiqizo yokusula okumanzi ithunyelwa ikakhulukazi emakethe yase-US, efinyelela cishe kumathani angama-267,300, okubalelwa ku-46.62% wevolumu ephelele yokuthekelisa. Uma kuqhathaniswa nenani eliphelele lama-wet wipes athunyelwe emakethe yase-US ngonyaka we-2019, inani eliphelele lemikhiqizo yokusula emanzi lifinyelele kumathani ayi-70,600, ukwanda ngo-378.69% ngo-2020.